Ping Pong Paddles tsara indrindra - Rackets sy baolina matihanina amin'ny tenisy ambony latabatra, harato azo averina miaraka amin'ny lahatsoratra sy kitapo fitehirizana - Pingpong paddle sy kojakoja latabatra lalao mpanamboatra sy orinasa |Chuangya
Ping Pong Paddles - Rackets tenisy ambony latabatra sy baolina, harato azo averina miaraka amin'ny lahatsoratra sy fitoeran'entana - Pingpong paddle sy kojakoja latabatra lalao
Ny refin'ny entana LxWxH 14,02 x 12,99 x 2,99 santimetatra
Karazana fanatanjahantena Tenisy ambony latabatra
Ilaina ny fivoriambe No
Fitaovana fototra HAZO
Vanim-potoana (Famaritana) olon-dehibe
SET PREMIUM FENO: Ny fonosana avo lenta dia misy 4ping pongfody, 6baolina ping ping, harato ping pong azo averina miaraka amin'ny lahatsoratra ary koa kitapo azo entin-tanana mba hahafahanao mitazona ny kojakoja voalamina na mitondra ny fitaovana mandehandeha.
HAZO TSARA: Ny mena sy mainty tsirairaytenisy ambony latabatraNy racket dia misy 5 sosona amin'ny tànana hazo mahatohitra crack tsara kalitao izay tsy hiparitaka.Mifanaraka tsara amin'ny ankabeazan'ny felatanana ny tahony mirefodrefotra, mamela ny fikitihana mafy ary tsy hatsembohana mba hitazonana ny tananao ho madio.
PRO LEVEL: Ny tsirairay amin'ireotenisy ambony latabatraNy paddles dia misy padding fingotra izay napetraka miaraka amin'ny lakaoly premium izay mitazona.Tsy misy peeling na kosehina.Ny fingotra spongy sy mivadika dia natao ho an'ny fihodinana tsara amin'ny latabatra rehetra!
Ampiasaina na aiza na aiza: Ny fitaovana tsirairay ao amin'ny ping pong set dia matanjaka tsara mba hilalao ao an-trano sy any ivelany.Ny latabatra ping pong dia vita amin'ny kalitao tsara indrindra ary miantoka fa azo ampiasaina amin'ny ankizy sy ny olon-dehibe.
REACTIVEBOLA PING PONG: Ny kitapo tenisy ambony latabatra dia ahitana baolina enina kintana fotsy sy volomboasary enina vita amin'ny fitaovana ABS 40mm matevina sy mateza.Ireo baolina tenisy ambony latabatra ireo dia mety tsara ho an'ny mpankafy, vao manomboka ary mpilalao matihanina.
teo aloha: Seza fitobiana azo entina miforitra miaraka amin'ny kitapo
Manaraka: ambongadiny bisikileta ampanjifaina rafitra vy mainty hazakazaka bisikileta lalana hafainganam-pandeha
vy vy 5kg 6kg 8kg kettlebell portable...
Klioba fanazaran-tena an-trano Gym Fitness Bar Removable St...
10-55kg Fingotra Barbell Curl Bar boribory loha...